नेकपाको सचिबालय वैठक आज बस्दै, प्रचण्ड कार्यकारी भएपछिको पहिलो वैठकले के के गर्ला निर्णय ? - News site from Nepal
नेकपाको सचिबालय वैठक आज बस्दै, प्रचण्ड कार्यकारी भएपछिको पहिलो वैठकले के के गर्ला निर्णय ?
काठमाडौं– दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी तयभएपछि सत्तारुढ नेकपाको पहिलो सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ । बैठक आज बिहान ९ बजे पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बस्दैछ । बैठकको अध्यक्षता पुष्पकमल दाहालले गर्नेछन् ।